पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरून् ! पढ्नुहोस् आजको राशिफल – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /Horoscop/पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरून् ! पढ्नुहोस् आजको राशिफल
पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरून् ! पढ्नुहोस् आजको राशिफल
वृश्चिकः– सवैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्दा राम्रै हुनेछ । काम गर्दा साथी भाईको सहयोग पाईनेछ । संघर्षबाट सफलताको शिखर चढ्न पाईनेछ । परिश्रमको अन्तिम परिणाम सुखद रहनेछ । कार्य क्षमतामा कुनै कमि आउने छैन । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ हुनेछ ।
आज २७ भदौ २०७८, आइतवार : आजको राशिफल